More information in Isizulu
Leli sayithi liqukethe ulwazi oluyisisekelo mayelana neYunivesithi yasePécs nezinhlelo zayo zezinga. Ukuze uthole ukwaziswa okuningiliziwe, sicela uvakashele English website.
IYunivesithi yasePécs, eyunivesithi endala kunazo zonke eHungary, yasungulwa ngo-1367. Ngamakhono ayo ayishumi nabangu-20 000 abafundi namuhla ingenye yezindawo eziphakeme kunazo zonke zeMfundo ePhakeme. Ngaphandle kokuba yiyunivesithi endala kunazo zonke ezweni, iYunivesithi yasePécs kanye namakhono ethu amaningi nezinhlelo zokutadisha zathatha isikhundla esiphambili ezindaweni ezihlonishwa kakhulu emhlabeni wonke.
IYunivesithi yasePécs iyindawo eyaziwa kakhulu kubafundi bamazwe ngamazwe ngenxa yemvelo evikelekile, izinga eliphezulu lokufundisa, izindleko zokufundela ezifanele, izindleko zokuphila eziphansi kanye nomphakathi omkhulu wezifundo zomhlaba wonke.
IYunivesithi yasePécs ihlinzeke izinhlelo ezigcwele zokufunda ngesiNgisi iminyaka engaphezu kwengu-30 nesiJalimane iminyaka engaphezu kwengu-10. Kuziqhenya ngokubamba abafundi abangaphezu kuka 4000 bamazwe ngamazwe avela emazweni angaphezu kwekhulu. Bakhetha ukufunda eNyuvesi yasePécs, ngenxa yekhwalithi yokufundisa, ukufunda nokucwaninga.
Imfundo ephezulu yaseHungary imemezele kahle kakhulu emfundweni engaphezu kuka-600 futhi yaqala neYunivesithi yasePécs, eyunivesithi yokuqala eHungary.
Ucwaningo lwezemfundo ephakeme luhlinzekwa ngezinhlobo ezimbili zemfundo ephakeme, eyunivesithi (egyetem ngesiHungary) nasekolishi (főiskola ngesiHungary), bobabili bangase banikeze izifundo kuzo zonke imijikelezo emithathu yokuqeqesha: Isifundo se-Bachelor, i-Master course kanye ne-Doctoral course.
Nakuba isakhiwo sezinga lihlukaniswe ngezifundo eziningi, kunezinhlelo ezithile ezididiyelwe (eyodwa-tier) lapho izinga le-Bachelor kanye nezinga likaMongameli lihlanganisiwe: imithi yezilwane, izakhiwo, amazinyo, imithi, imithi kanye nemithi. Lezi zinhlelo ezintathu zihlanganisa ama-semesters angu-10-12 (eminyakeni emi-5-6) futhi ekupheleni konyaka odlule kufanele ube nokuqokwa kwama-300 kuya ku-360.
Uhlelo lwamacredit nokuqashelwa
iEuropean Credit Transfer System (ECTS) yilona kuphela uhlelo lwamacrdit ekhona eHungary. Ngenxa ye-European Credit Transfer System (ECTS), ama-credits nama-degrees awanikwa eHungary adluliselwa kwezinye izikhungo zaseYurophu futhi ngokufanayo. Ngaphandle kwediploma, abafundi nabo banikezwa isengezo esikhethekile esibonakala kulo lonke i-European Union.
Ukuze uqinisekise izindinganiso eziphakeme zamazwe omhlaba, izinyathelo zokulawula izinga eliphezulu zisetshenzisiwe. iHungarian Accreditation Committee (HAC) liqhuba izinqubo eziqhubekayo zezikhungo nokugunyazwa kwezinhlelo futhi lihlolisisa izinga lemisebenzi yezemfundo yokuhambisana nama-European Standards and Guidelines. Izikhungo zemfundo ephakeme yaseHungary nezifundo zivunyelwe yi-HAC.
seHungary anikezwa ohlelweni lweminye imihlangano nezinkulumo. Izifundo zitholwa izethameli ezinkulu, ukuhambela kunconywa, kepha ngokuvamile akudingekile. Ekupheleni kwabafundi be-semester kufanele badlulise izivivinyo ezibhaliwe noma zomlomo. Ama-seminari ngokuvamile amaqembu okufundela angakahleleki kubafundi abangu-10-20, lapho kunendawo yokubonisana ngabanye, ukuxoxisana ngezinto zokufunda nokuxazululwa. Ngokuvamile baphetha ngephepha elibhalwe ngokuzimela noma ukuhlolwa.
Uhlelo lokubamba ngokuvamile olusetshenziswa yizikhungo eziphakeme zemfundo yaseHungary yilona elilandelayo:
Ibanga eliphakeme kakhulu li-5 elihle kakhulu.
Ibanga 4 lihle.Ibanga lesi-3 lilinganiselwe.
Ibanga lesi-2 lidlula.
Ibanga 1 lihluleka - inkambo kumele iphindwe.
Ukwakhiwa kweYunivesithi yasePécs
IYunivesithi inesakhiwo sendabuko yamayunivesithi aseYurophu, eholwa ngumqondisi, isikhansela kanye neqembu labaphathi bezintathu ezintathu, ngamunye obhekene nendawo ehlukile yokuphila kweyunivesithi. Amandla, aphethwe ngumfundisi, kanye nezikhungo eziholwa ngumqondisi, zimelela izindawo eziphakeme zemfundo. Zihlukaniswe eminyangweni ehlangene nsuku zonke nabafundi futhi inesibopho sezinhlelo zemfundo.
Kusukela ngo-2018, izicelo zingathunyelwa nge-intanethi yesayithi lethu lesicelo.
Ukuze uqale inqubo, chofoza nje lapha.
Uma ungenqume okwamanje ukuthi iyiphi yezinhlelo ozikhethelayo, sebenzisa uhlelo lokusebenza lokusesha uhlelo futhi uthole indlela yakho manje!
Funda ngezinhlelo zokufunda ezikhona, izimali kanye nezidingo zokungena.
Khetha uhlelo lwakho oluthandayo, chofoza ku-Apply Now bese uqala uhlelo lwakho lokusebenza.
Bhalisa kwisayithi lesicelo, gcwalisa ifomu lesicelo, ulayishe imibhalo edingekayo bese uhambisa isicelo sakho!
Ngemuva kokuthi uthumele isicelo sakho, uzothola isaziso sokukhokhwa kwemali yesicelo.
Uma iyunivesithi ithola imali yakho yesicelo, ihhovisi lokungena liqala ukuhlolwa kwesicelo sakho futhi likumeme ekuhlolweni kokungena noma nge-Skype interview.
Uma uphumelela ekuhlolweni kokungena / ukukhulumisana kwe-Skype, uthola Incwadi Yokutholwa Kwemibandela kanye nesaziso sokukhokhwa kwemali yokufundela.
Uma iyunivesithi ithola imali yakho yokufunda, ihhovisi lokungenisa likunikeza iNcwadi Yokungeniswa futhi ungaqala ukuhlela uhambo lwakho ePécs!
Sicela wazi ukuthi isicelo sezinhlelo ze-Medical School (General Medicine, Pharmacy, Dentistry, Biotechnology, Humanmedizin, Zahnmedizin, Pharmazie) siya endaweni ehlukile.
Hlola iwebhusayithi yesicelo se-Medical School online
Ukuze afanelekele izifundo zaseyunivesithi eHungary, umfundi kufanele akhombise ukuthi bahlangabezana nezidingo eziningana zalolu hlelo. Kunezidingo ezithile ezijwayelekile zokufaka okumele zihlangane nazo zonke abafundi. Ngaphezu kwalokho, kunesidingo sokungena esicacile kwenkambo umfundi ayifunayo. Isibonelo, inkambo yobunjiniyela ingadinga izinga eliphakeme lemfundo yezibalo zangaphambilini. Ukwaziswa ngezidingo ezithile zokungena kungatholakala ekhasini elilodwa lomsebenzi.
Bonke abafundi kudingeka baqinisekise ukuthi bangakwazi ukukhuluma isiNgisi kumgangatho ozowavumela ukuba bafunde uhlelo lwabo. Ungakwenza lokhu ngezindlela eziningi:
Ungumfaki-zicelo okhuluma isiNgisi (ikhophi yepasipoti yakho yobufakazi)
Unenhloko enkulu / encane ngesiNgisi, okusho ukuthi isiNgisi yinkambu yokutadisha (ukuhlola ngezilimi zesiNgisi noma izincwadi)
Uqhubekile izifundo zakho ze-undergraduate ngolimi lwesiNgisi
Unesivivinyo solimi lwesiNgisi esaziwayo emhlabeni wonke (IELTS, TOEFL, TELC, ECL, njll)
Abafundi bamazwe angaphandle akudingeki bakwazi ukukhuluma isiHungary ukuze bahlanganyele ezinhlelweni ze-University of Pécs ezinikezwa ngesiNgisi noma ngesiJalimane. Kodwa-ke, ukhuthazwa ukuba ufunde isiHungary ukuze ukwazi ukuxhumana nabantu bendawo (nakuba iningi labantu abasha futhi, ngokuqinisekile, othisha bakho bazokhuluma isiNgisi nesiJalimane). Ukuze uthuthukise isiHungary sakho, ungajoyina izifundo ezahlukene zokuHungary.
Ukuze uthole olunye ulwazi mayelana nezidingo zokungena, sicela uchofoze lapha.
Abamele ezweni lakho​
IYunivesithi yasePécs isebenza eduze nama-ejensi amaningi ezemfundo, abacebisi kanye nezinsizakalo zezemfundo emhlabeni jikelele emhlabeni wonke. Lawa ma-agent kanye nabacebisi bangakwazi ukweluleka ngenkambo efanele kunazo zonke, futhi banikeze ukwesekwa kanye nezeluleko kuyo yonke inqubo yokufaka isicelo.
Hlola uhlu lapha ukuze uthole ummeleli osemthethweni we-University of Pécs eduze nawe.
Uma ungathanda ukwazi okwengeziwe mayelana ne-UP, ukuphila komfundi ku-Pécs noma uhlelo lokutadisha onentshisekelo yakho uzizwe ukhululekile ukuxhumana nabama-ambassadors abaFundi Bezizwe Zomhlaba Wonke.
Lungiselela ukuhlala kwakho​
Uma usuvele uthola isiqinisekiso mayelana nokwamukela izifundo zakho ezihleliwe noma ucwaningo eNyuvesi yasePécs, ukuhlela uhambo lwakho kungase kuqale. Lapha ungathola umhlahlandlela wabafundi bamazwe ngamazwe ukuthi ungalungiselela kanjani ukufunda eNyuvesi yasePécs nokuhlala ePécs, eHungary ngokujwayelekile. Zulazula ngokusebenzisa imenyu ngakwesobunxele bese uthola lonke ulwazi oludingayo ezinyathelweni zokuqala ngaphambi kokuhamba kwakho. Ulwazi oluwusizo oluthe xaxa luzokwenziwa ngemuva kokufika.
Ukuqhubeka nokuhlala e-Pécs, abafundi abangenayo banezinketho ezimbili eziyisisekelo. Bangase bahlale edomitory noma bafune indawo yokuhlala.
IYunivesithi yasePécs inemibhoshongo eyishumi. Zitholakala ezindaweni ezithule, zokuhlala zedolobha. Izitifiketi zaseYunivesithi kanye nendawo yedolobha zifinyeleleka kalula kusuka ezindlini. Iningi lamaborori asanda kulungiswa. Amakamelo ahlinzekwa kahle futhi aqukethe izindlu zokugeza. Amakhondomu anikezwa. Amakamelo anikezwa ngezinga elilinganiselwe lentengo: cishe i-EUR 140 ngenyanga.
Kwabafundi abangenayo abadinga indawo yokuhlala ephakeme, amaflethi aqashiwe ahlukile. Ukuqasha igumbi kunganikeza abafundi ukuthula, induduzo kanye nobumfihlo abazidingayo.
Izindleko zokuhlala eHungary ngokuvamile zibhekwa njengeziphansi ngamazinga aseYurophu. Ukuze ukwazi ukukhokha intela yakho, uthenge ukudla okufanele futhi unikeze kusihlwa ngezikhathi ezithile, udinga ubuncane be-HUF 150,000 (≈EUR 470).
Nasi uhlu lwezinto ezibalulekile ukuze uthole umbono wezintengo.
Ukufunda kwamanye amazwe kungaba nzima. Ude kude nekhaya, konke kubonakala kungavamile, okungaqondakali, futhi ungazizwa unesizungu ngezinye izikhathi. Kodwa ungakhathazeki, lokhu kuvamile, futhi kwenzeka kuwo wonke umuntu. IYunivesithi yasePécs ikhiqize amanye amathuluzi ukuze wenze ushintsho lwakho lube bushelelezi ngangokunokwenzeka.
Uhlelo lwamaBuddy: Abafundisi bomuntu siqu (abaqashi) banikeza abafundi bamazwe ngamazwe usizo ekuhlanganyeleni kwabo endaweni eyunivesithi.
Izifundo zeSenitization zenkcubeko Izifundo zesiNgisi-ezifundiswa zivulekele bonke abafundi baseyunivesithi ukuze basize ukuqonda isiko lesiHungary, umphakathi kanye nokuthola umbono wezinkinga zezenhlalakahle nezombusazwe lapha. Uzokwazi ukuya kulezi zifundo mahhala.
Ukululekwa kwabafundi: Ukululekwa kwabafundi kuthathwa njengenkonzo ebalulekile eNyuvesi yasePécs. Umgomo wayo oyinhloko ukuhlinzeka abafundi ngokululekwa ngokwengqondo, okuqondayo nokuziphendulela kwengqondo.
I-Campus Legal Aid: I-CLAC (Campus Legal Aid Clinic) yasungulwa ngonyaka ka-2015 ukuze ikhulise ulwazi lwezemfundo lwabafundi bomthetho, ngesikhathi esifanayo inikeza izeluleko zomthetho eziqeqeshiwe nezokuqapha zabafundi be-UP.